गोस्पल ट्र्याक्ट एंड बाइबल सोसाइटीद्वारा प्रदान गरिएको बाइबलीय शिक्षा
तपाईंको बारेमा सबै कुरा जान्ने कोही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा के तपाईंलाई थाहा छ? परमेश्वरको पुत्र येशूले तपाईंले गर्नुभएका हरेक कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँले नै यस संसार र यसमा भएका यावत्‌ थोक बनाउनुभयो। उहाँले विगत, वर्तमान र भविष्य जान्नुहुन्छ। उहाँले तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ तपाईंलाई पापबाट बचाउनको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। तपाईंको जीवनमा खुसी ल्याउनको निम्ति उहाँसँग एउटा योजना छ।
एक दिन येशू आफ्ना साथीहरूसँग यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सामरियाको एउटा नगरमा आउनुभयो। येशूका साथीहरू खाना किन्नको निम्ति गएको बेलामा उहाँ आराम गर्न एउटा इनारको छेउमा बस्नुभयो।
येशू त्यहाँ बस्दै गर्नुहुँदा, एकजना स्त्री त्यस इनारमा पानी भर्न आइन्‌। येशूले तिनलाई सोध्नुभयो, “के मलाई पानी पिउन दिन सक्छ्यौ?”
पूरा लेख: तपाईंको लागि जवाफ – तपाईंको डर र अशान्तिलाई प्रतिस्थापन गर्ने शान्
त्यस स्त्री छक्क परिन्‌। तिनले सोधिन्‌, “म सामरी जातको हुँ र यहूदीहरूले हामीसँग कुनै सरोकार राख्दैनन्‌ भन्ने के तपाईं जान्नुहुन्न?”
येशूले तिनलाई नरम भएर जवाफ दिनुभयो, “यदि तिमीले साँच्चै परमेश्वरलाई र तिमी जोसँग कुरा गर्दै छ्यौ उसलाई जानेकी भए, तिमीले मसँग जिउँदो पानी माग्ने थियौ। मैले त्यो खुसीसाथ दिने थिएँ।”
त्यस स्त्रीले उहाँलाई छक्क परेर हेरिन्‌। तिनले भनिन्‌, “महाशय, इनार गहिरो छ। तपाईंसित उघाउने कुनै भाँडो पनि छैन। अनि तपाईंले कहाँबाट त्‍यो जिउँदो पानी उघाउनुहुन्छ?”
येशूले फेरि जवाफ दिनुभयो, “यो पानी पिउनेहरू फेरि तिर्खाउनेछन्‌, तर यदि तिमीले मैले दिएको पानी पियौ भने तिमी कहिल्‍यै तिर्खाउनेछैनौ।”
त्यस स्त्रीले भनिन्‌, “महाशय, मलाई त्यही पानी दिनुहोस्‌, र म तिर्खाउनेछैनँ, र यहाँ पानी भर्न आइरहनुपर्दैन।”
येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्‍याऊ।”
त्‍यस स्‍त्रीले भनिन्‌, “मेरो पति छैन।”
येशूले भन्नुभयो, “यो सत्य हो। तिम्रा पाँच जना पति भइसकेका छन्‌, र जो अहिले तिमीसँग छ, त्‍यो तिम्रो पति होइन।”
यो मानिसलाई मेरो बारेमा कसरी थाहा भएको हो भनी तिनी छक्क परेर भनिन्‌, “महाशय, तपाईं अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी म थाहा पाउँछु। मेरो एउटा प्रश्न छ। हाम्रा मानिसहरूले यस डाँडामा आराधना गर्दै आएका छौं। अनि तपाईंहरू भन्नुहुन्छ, कि आराधना गर्ने स्थान यरूशलेम हो।”
येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “हामीले कहाँ आराधना गर्ने भन्ने कुरा त्यत्ति महत्त्वपूर्ण होइन। आज
साँचो विश्वासीहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न सक्छन्‌।”
त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनिन्‌, “म जान्दछु, कि मसीह आउनुहुन्छ, जसलाई ख्रीष्ट भनिन्छ, र जब उहाँ आउनुहुन्छ, तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुनेछ।”
तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “म उही हुँ।”
तिनी आफ्‍नो गाग्रो छोडेर नगरतिर गइन्‌। तिनले कराउँदै भनिन्‌, “आओ, एक जना मानिसलाई हेर, जसले मैले गरेका सबै काम मलाई बताइदिनुभयो। कतै उहाँ नै ख्रीष्‍ट त हुनुहुन्‍न?”
तब त्यस नगरका मानिसहरू निस्‍केर येशूलाई भेट्न गए। उहाँ नै ख्रीष्ट, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी धेरैले विश्वास गरे, किनकि उनीहरूको बारेमा उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो। यो वृत्तान्त तपाईंले बाइबलमा यूहन्नाको सुसमाचारको पुस्तक ४ अध्यायको ३ पददेखि ४२ पदसम्ममा (यूहन्ना ४:३-४२) पढ्न सक्नुहुन्छ।
येशूले हाम्रो बारेमा सबै असल कुराको सँगसँगै खराब कुरा पनि कुरा जान्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो जीवनमा गरेका खराब कामहरू हामी लुकाउन चाहन्छौं, तर हामी ती येशूबाट लुकाउन सक्दैनौं। हामीले गल्ती गर्दा भोग्नुपर्ने दण्डबाट हामीलाई बचाउन उहाँ आउनुभएको हो। हामीले हाम्रो हृदयमा महसुस गर्ने त्यो गह्रौँ भावना हटाउन र हामीलाई शान्ति दिन उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। हाम्रो पापहरू मेटाउन र हाम्रो मृत्युपछि हामीले स्वर्गमा घर पाउने कुरा सम्भव तुल्याउन उहाँ मर्नुभयो।
तपाईंको सबै खाँचोहरू र सबै प्रश्नहरूको समाधान येशू हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईंको साथी हुन चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईंको हृदयको रिक्ततालाई भर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईंको डर र अशान्तिलाई शान्ति र सौम्यतामा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ।
येशूले भन्नुहुन्छ, “मकहाँ आओ ... र म तिमीलाई विश्राम दिनेछु” (बाइबलमा मत्तीको पुस्तकको ११ अध्यायको २८ पद)। केवल उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस्‌ र उहाँलाई तपाईंको जीवनमा आउनलाई अनुरोध गर्नुहोस्‌। जसै तपाईंले यी महान्‌ परमेश्वरलाई विश्वासमा ग्रहण गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईंको हृदयमा रहनुहुनेछ। उहाँको उपस्थितिले तपाईंलाई आनन्द दिनेछ। उहाँले तपाईंलाई जीवनमा शक्ति र उद्देश्य दिनुहुनेछ। उहाँ नै तपाईंको लागि समाधान हुनुहुनेछ।
एक समयमा यो संसारमा केही पनि थिएन।
न आकाशमा तारा।
पूरा लेख: जान्नुपर्ने सर्वोत्तम कथा
न समुन्द्र, न त सुन्दर फुलहरू नै।
सबै शून्य र अन्धकार थियो।
तर परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो।
परमेश्वरसँग राम्रो योजना थियो। उहाँले सुन्दर संसारको बारेमा सोच्नुभयो, र जस्तो उहाँले सोच्नुभयो, त्यस्तै उहाँले बनाउनुभयो। उहाँले सबै थोक शून्यताबाटै बनाउनुभयो। परमेश्वरले जुनसुकै थोक बनाउनुहुँदा, उहाँले यति मात्र भन्नुभयो, “यो बनियोस्‌” र त्यो बनियो!
उहाँले ज्योति बनाउनुभयो। उहाँले नदीहरू र समुन्द्रहरू, घाँसले ढाकिएको पृथ्वी, पशु-पक्षीहरू र रुखहरू बनाउनुभयो।
अन्त्यमा, उहाँले एक पुरुष मानिस बनाउनुभयो, अनि त्यस मानिसको निम्ति एक स्त्री बनाउनुभयो। उनीहरूको नाउँ आदम र हव्वा थियो।
परमेश्वरले उनीहरूलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। प्रत्येक साँझ उनीहरू रहँदै गरेको सुन्दर बगैँचामा परमेश्वर उनीहरूलाई भेट गर्न आउनुहुन्थ्यो।
त्यस बगैँचामा भएका सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूले आनन्दसाथ उपभोग गर्न सक्थे, तर त्यहाँ भएको एउटा रूखको फल नखानू भनी परमेश्वरले उनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो।
उनीहरू त्यहाँ खुसी नै थिए तर परमेश्वरको शत्रु शैतानले एक दिन आदम र हव्वालाई परीक्षामा पार्यो। परमेश्वरले मनाही गर्नुभएको रुखको फल चाख्ने उनीहरूले निर्णय गरे। उनीहरूले पाप गरे। पहिलो पटक उनीहरू लज्जित र दुःखित भए।
उनीहरूले त्यस बेलादेखि उसो परमेश्वरसँग कुरा गर्न सकेनन्। अब उनीहरूलाई दुःख र सङ्कट आइपर्ने भयो। अनि उनीहरू मर्नुपर्ने भयो। उनीहरू कत्ति दुःखित थिए होलान्‌!
परमेश्वरले उनीहरूलाई सहायता गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। ठीक समय आउँदा, उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाउनुहुने थियो। येशू स्वर्गबाट आउनुहुने थियो र पाप-क्षमाको निम्ति एउटा उपाय गर्नुहुने थियो। यसो गर्नको निम्ति येशूले मानव जातिको लागि दुःख भोग्नुपर्थ्यो र मर्नुपर्थ्यो। परमेश्वरले मुक्तिदाता पठाउनुहुन्छ भन्नुहुँदा उनीहरू कति खुसी थिए होलान्!
आदम र हव्वाको छोराछोरी र नातिनातिनाहरू भए। केही समयपछि नै, संसारमा धेरै मानिसहरू भए।
सबै जना खुसी भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो। उनीहरूले के गर्नुपर्छ भनी उहाँले भन्नुभयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको नियमहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन्:
१. मबाहेक अरू कुनै देवता-देवीहरू नमान्नू।
२. आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै मूर्ति नबनाउनू।
३. परमप्रभु परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमा नलिनू।
४. शबाथ-दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनि याद राख्नू।
५. आफ्नो बुवा र आमालाई आदर गर्नू।
६. हत्या नगर्नू।
७. व्यभिचार नगर्नू।
८. चोरी नगर्नू।
९. आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झूटो गवाही नदिनू।
१०. आफ्‍नो छिमेकीका घरको लालच नगर्नू। आफ्‍नो छिमेकीकी पत्‍नीको लालच नगर्नू, आफ्‍नो छिमेकीको कमारा, कमारी, गोरु, गधा वा त्‍यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नू। (प्रस्थान २०:३-१७ अर्थात्‌ बाइबलमा भएको प्रस्थानको पुस्तकको २० अध्यायको ३ पददेखि १७ पदसम्म)।
हामीले पनि यी पढ्न सकौं भनी यी बाइबलमा लेखिएका छन्‌। यदि हामीले यी पालना गर्यौं भने हामी खुसी हुन्छौं।
हामीले यी कुराहरूको पालना गरेको शैतानले चाहँदैन। कहिलेकाहीँ कसैले पनि नदेखेको बेलामा केही कुरा चोर्नलाई त्यसले हामीलाई भन्छ। तर परमेश्वरले यो जान्नुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ।
कहिलेकाहीँ शैतानले हामीलाई झूट बोल्न परीक्षामा पार्छ र कसैले पनि थाहा पाउँदैन भनी विचार गर्न लगाउँछ। परमेश्वरले यो जान्नुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा सुन्नुहुन्छ।
जब हामी यी कुराहरू गर्छौं, हामीलाई भित्र नराम्रो लाग्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई असल हुनको लागि सहायता पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैकारणले उहाँले येशूलाई संसारमा पठाउनुभयो। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा सम्झनुभयो।
धेरै वर्षपछि, येशू सानो बालकको रूपमा जन्मनुभयो। उहाँ हुर्कनुभयो र वयस्क मानिस हुनुभयो।
उहाँले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। उहाँले रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो र उहाँले दृष्टि-विहीनहरूलाई दृष्टि दिनुभयो। उहाँले बालकहरूलाई आशिष्‌ दिनुभयो।
येशूले कहिल्यै पनि गलत गर्नुभएन। उहाँले मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा र उहाँको आज्ञापालन कसरी गर्ने भनी बताउनुभयो।
केही समयपछि येशूका शत्रुहरूले उहाँलाई कीला ठोकी क्रूसमा टाँगे। उहाँ मर्नुभयो।
उहाँले सम्पूर्ण मानिसहरूको पापको निम्ति, यतिसम्म कि उहाँलाई क्रूसमा टाँग्ने मानिसहरूको निम्ति समेत पनि, दुःख भोग्नुभयो र उहाँ मर्नुभयो।
येशूलाई दफन गरियो। तर अचम्मको घटना घट्यो। उहाँ चिहानमै रहिरहनुभएन। उहाँ मृत्युबाट जीवित भई उठ्नुभयो!
लगत्तै, परमेश्वरले उहाँलाई बादलमा उचालेर स्वर्गमा लैजानुभयो। जब उहाँका साथीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएको हेर्दै थिए, एकजना स्वर्गदूतले उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भनी बताए।
येशू हाम्रो पापको लागि पनि मर्नुभयो। हामी आफ्नो पापको निम्ति दुःखित भएको र आफ्नो पाप स्वीकार गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामीलाई क्षमा गर्नको निम्ति उहाँ तयार हुनुहुन्छ।
हामी जुनसुकै समयमा परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न सक्छौं। उहाँले प्रत्येक शब्द सुन्नुहुन्छ र प्रत्येक विचार जान्नुहुन्छ। हाम्रा पापहरूको क्षमा पाउँदा, उहाँले हामीलाई भित्र खुसी महसुस गराउनुहुन्छ। तब हामी जे ठीक छ त्यही गर्न इच्छा गर्छौं। तब हामी दयालु हुने इच्छा गर्छौं।
हामी परमेश्वरको आज्ञापालन नगर्ने र शैतानलाई पछ्याउने छनोट पनि गर्न सक्छौं। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दछ कि यदि हामीले उहाँलाई यो जीवनमा इन्कार गर्यौं भने उहाँले हामीलाई नरकमा पठाउनुहुनेछ। नरक आगोको ठाउँ हो, जुन कहिल्यै निभ्दैन।
तर यदि हामीले येशूलाई प्रेम गर्यौं र उहाँको आज्ञापालन गर्यौं भने, उहाँ आउनुहुँदा उहाँले हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुनेछ। स्वर्ग परमेश्वर र उहाँको पुत्र येशूको सुन्दर घर हो। यो प्रेम र ज्योतिको घर हो, जहाँ हामी सधैँ खुसी हुनेछौं।
येशू मलाई गर्छन्‌ प्यार
१. येशू मलाई गर्छन्‌ प्यार, यो हो सब बाइबलको सार
बालक उनका हुन्‌ वरदान ती निर्बल उनी बलवान्।
को. प्यार गर्छन्‌ मलाई, प्यार गर्छन्‌ मलाई
प्यार गर्छन्‌ मलाई येशूले गर्छन्‌ प्यार।
२. येशू मलाई गर्छन्‌ प्यार, प्राण दिई खोले स्वर्गको द्वार
मेरो पाप सब धुनेछन्‌, बालकलाई बोलाउँदछन्‌।
३. येशू मलाई गर्छन्‌ प्यार, जस्तै निर्बल छु बिमार
आफ्नो सिंहासनदेखि देख्दछन्‌ सधैँ मलाई।